बाँदरको डकैती! बैंकबाट निस्कने बित्तिकै बाँदरले लुट्यो ३ लाख - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
बाँदरको डकैती! बैंकबाट निस्कने बित्तिकै बाँदरले लुट्यो ३ लाख
२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार १२:३४ December 14, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । पैसाको प्रयोग मानव जातीले मात्रै प्रयोग गर्छन् । अन्य जनावरलाई यसको कुनै प्रयोग हुदैन । यसको लुटपाट पनि मानिसलेनै गर्छन् । तर भारतको उत्तर प्रदेशमा बादरले १ व्यक्तिको २३ लाख २० हजार रुपैयाले भरिएको झोला लुटेको छ ।
उडिरहेको जहाजमा भेटियो मान्छेको मुटु, यसरी गरियो इमरजेन्सी ल्याण्डिङ
मदिरा सेवन गर्ने पुरुषभन्दा महिलाको मृत्यु बढी
एउटा आलूको मूल्य १२ करोड रुपैयाँ